‘२० मिनेट बिजुली जाँदा’ ८ संक्रमितको मृत्यु ! – Nepal Press
‘२० मिनेट बिजुली जाँदा’ ८ संक्रमितको मृत्यु !
‘२० मिनेटमात्रै अक्सिजन रोकिँदा के हुन्छ थाहा पायौं’
२०७८ जेठ १४ गते १७:५९
अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. शरदचन्द्र बरालका अनुसार मृत्यु हुनेमा शनिबारमात्रै अपरेसनमार्फत सन्तानलाई जन्म दिएकी एक सुत्केही महिलासमेत छन् । उनका अनुसार अक्सिजन आपूर्तिमा कमी आउँदा मृत्यु हुनेमा तनहुँका ३, कास्कीका २, पर्वत, म्याग्दी र स्याङजाका एक÷एक जना छन् ।
निर्देशकको झुठ : अक्सिजन दिँदादिँदै मृत्यु भएको हो
अस्पताल गण्डकी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अन्तर्गत सञ्चालित छ । प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा भरतबहादुर खत्रीले भने पर्याप्त अक्सिजन दिएर उपचार गरिरहेकै क्रममा मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् ।
‘मृतकहरुमध्ये धेरै जनामा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या थियो । अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेदेखि नै उच्चमात्रामा अक्सिजन दिई उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं,’ डा. खत्रीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हिजो (बिहीबार) बिहान विद्युत आपूर्तिमा केही समस्या हुँदा पर्याप्तमात्रामा अक्सिज आपूर्ति हुन नसकेको तर, वार्डहरुमा हुने आपूर्ति नरोकिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’
डा. खत्रीले अक्सिजनको कमी नभई बिरामीमा दीर्घकालीन र डायलासिस गनुपर्ने बिरामीको मात्रै उपचारकै क्रममा मृत्यु भएकोसमेत दाबी गरेका छन् । तर, अस्पताल स्रोतका अनुसार मुत्यु हुने सबैको आवश्यकता बमोजिम हाइफलो अक्जिन दिन सकेको भए ज्यान बचाउन सक्ने स्थिति रहेको बताएको छ ।
प्रदेशभर ३० जना संक्रमितको मृत्यु
गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो २४ घन्टामा ३० जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो केही दिनयता कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ओरालो लागिरहेको थियो । यसअघि कोरोनाबाट जेठ ५ गते सबैभन्दा बढी ३० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी कास्कीका १२ जना छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशभर पछिल्लो एकदिनमा मृत्यु हुनेमा मुस्ताङ र पर्वतका २, २ जना, गोरखा र स्याङजाका ३, ३ जना, तनहुँका ६ जना, नवलपुर र बागलुङका एक/ एक जना छन् ।
योसँगै गण्डकीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय नाघेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख डा विनोदविन्दु शर्माका अनुसार प्रदेशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेका संख्या शुक्रबारसम्म ६ सय २४ पुगेको छ ।
८ सय संक्रमित ७ सय निको
गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो २४ घन्टामा ८ सय ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोनाबाट निको हुनेका संख्या ७ सय ७० छ ।
पछिल्लो समय प्रदेशमा कोरोना पुष्टि हुने संख्या सँगै निको हुनेको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ । प्रदेशभर ११ हजार सक्रिय संक्रमित छन् । जसमध्ये १० हजार होम आइसोलेसनमा छन् ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ १४ गते १७:५९